Tag: fanaraha-maso ara-tsosialy
Fotoana famakiana: <1 minitra Ny CRM ara-tsosialy dia iray amin'ireo voambolana izay mirona hampiasaina sy misavoritaka. Toa saika ny orinasa rehetra manana ny fiasa ara-tsosialy dia nanomboka nanasokajy ny fampiharana azy ireo tao amin'ny tontolon'ny Social CRM. Raha ny fahitako azy dia misy endrika maromaro tsy maintsy ananan'ny sehatra sosialy alohan'ny iantsoany azy hoe CRM ara-tsosialy: fanaraha-maso - ny fahaizana manara-maso ny fiaraha-monina amin'ny fotoana tena izy ary mametraka fanairana. Famantarana - ny fahaizana misambotra ny
Fotoana famakiana: 2 minitra Ao amin'ny tontolon'ny fiaraha-monina ankehitriny, ny fitambarana izay tena lazain'ny mpanjifa dia manan-danja indrindra amin'ny marika. Mety ho fitaovana ilaina amin'ity toe-javatra ity ny fahaizan-tsaina. Ny fitaovana fanadihadiana an-tsoratra an'i Attensity dia mamoaka ny zava-misy, ny fifandraisana ary ny fientanam-po avy amin'ny valinteny valinteny voaray mifandraika amin'ny, hoy ny fanentanana fampiroboroboana, bitsika iray, fanavaozana Facebook, lahatsoratra bilaogy, valinteny fanadihadiana - azonao izany! Ny motera fitrandrahana Attensity dia mampihatra fitsipiky ny fiteny voasedra ara-potoana sy
Fotoana famakiana: 2 minitra Raha nanaraka ny fironana amin'ny haino aman-jery sosialy mihitsy ianao dia mety efa naheno zavatra betsaka momba ny fidirana amin'ny “resaka” sy ny fomba fandraisana anjara. Mety efa naheno ilay fampitandremana koa ianao: "miresaka momba ny orinasanao ny olona na eo ianao na tsia". Tena marina izany ary antony lehibe hitsambikinana amin'ny media sosialy ary hanomboka handray anjara. Raha anisan'ny resadresaka ianao dia afaka mamaly ny fanontanina, manao fanaraha-maso simba, ary
V Prev 1 2 3